U-Elon Musk eSNL ukhuluma ngeDogecoin, nokuwa kwedoge (ngoMeyi 8, 2021) - eCazoo
Ikhaya » Ikhaya » U-Elon Musk eSNL ukhuluma ngeDogecoin, futhi i-doge collapses (ngoMeyi 8, 2021)
U-Elon Musk, isikhulu esiphezulu seTesla ne-SpaceX, izinkampani ezimbili eziphumelele zeminyaka yethu yobuchwepheshe, ubengumbambisene naye (umethuli wabambisene) wesiqephu somdlalo odumile wamahlaya waseMelika Saturday Night Live. Isiqephu sikhishwe kusihlwa ngoMeyi 8, 5.30 isikhathi sase-Italy.
U-Elon Musk nomama uMaye Musk
Ngokusobala, njengomsekeli omkhulu, umemezele ezinsukwini zakamuva ukuthi ngabe futhi wakhuluma ngoDogecoin, meme wonke umuntu oyintandokazi we-cryptocurrency. Futhi wonke umuntu wacabanga ukuthi… 🚀
Esikhundleni salokho, ishadi alinasihawu: Intengo kaDogecoin iqale ukwehla ngokushesha nje lapho i-monologue yayo iphela, ngekhandlela elibomvu elihle, lisuka ku- $ 0,66 laya ku- $ 0,53 ngehora.
Intengo yeDogecoin, uhlaka lwesikhathi 1h
Kwesinye sezigaba ezidume kakhulu kulo mdlalo, i-Weekend Update eyindumezulu yomlando eyayihlelwe ngabalingiswa basenganekwaneni abanjengoNorm McDonald, uMusk wazethula njengomuntu wezezimali ongaphumeleli kulo mbukiso, uLloyd Ostertag, futhi wacelwa ukuba achaze kahle ukuthi uyini uDogecoin.
"Ngiyabonga Michael, ngishayele iDogefather," kusho uMusk etshela uMichael Che.
"(UDogecoin) waqala njengehlaya elisuselwa ku-Intanethi, kepha manje selisuswe ngendlela yangempela," kuchaza uMusk.
Ngubani owabuza kaningi uMusk ukuthi iyini ngempela, wakhipha ibhilidi ledola ephaketheni lakhe wayishaya phansi kwekhala likaMusk, waze wambuza nokuthi i-cryptocurrency iyiqiniso yini.
"Ingokoqobo njengaleyo dollar," kusho uMusk.
UColin Jost wagxumela esenzweni, waze wabuza nokuthi yini ngempela uDogecoin.
"Yikusasa lemali, yimoto yezimali enganqandeki ezothatha umhlaba wonke," kusho uMusk.
Futhi ngenkathi echaza ukuthi ama-cryptocurrensets angashintshaniswa ngemali, uChe uthe, "Hawu, ingxabano." (kuphithizela!)
"Yebo, ukuxokozela," kusho uMusk ehleka lapho ememeza "enyangeni!" (Kuyo inyanga! 🚀)
Ufuna ukubona ividiyo? Nakhu:
nasi isiqeshana sika-elon musk sichaza ukuthi yini i-doge coin eku-SNL… .uthe kuyaphithizela 😂 pic.twitter.com/iyXbKH0FPZ
- khuzwayo (@Khuzwayo) Kwangathi 9, 2021